Home News Xirsi Jaamac Gaani oo si kulul uga hadlay hadalkii shalay kasoo baxay...
Xirsi Jaamac Gaani oo si kulul uga hadlay hadalkii shalay kasoo baxay Golaha Aqalka Sare
Xirsi Jaamac Gaani oo ah wasiir dowlaha maadxtooyada Maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in qeyb yar oo ka mid ah Khilaafka u dhexeeyay Dowlada Dhexe iyo Kuwa Maamul Gobaleedyada la xaliyay, islamarkaana waxaa uu tilmaamay in qodobo qaar aan la xalinin.
Wasiirka ayaa sheegay in weli tabashooyin ay jiraan, islamarkaana dowlada Federaalka Soomaaliya ay isku mari la’yihiin qodobo muhiim u ah dowladnimada.
Sidoo kale waxaa uu shaaca ka qaaday in Maamulka jubbaland ay soo dhaweynayaan warmurtiyeedka ka soo baxay aqalka Sare.
Shalay ayay aheyd markii Aqalka Sare ay sheegin in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay Dowlada Dhexe iyo kuwa Maamul Gobaleedyada ka jira dalka.
Previous articleMuwaadin Soomaali ah oo lagu soo eedeeyay dambi nacayb ah
Next articleKooxda Daacish oo falalka ugu badan Ee dilalka ah ka fulisa Magaalada Muqdisho
KSrelief launches a number of humanitarian projects in Somaliland The official...
Xildhibaanada Ka So Jeeda Deganada Konfur Galbed oo So Faragaliyay Moshinka...